IELTS ဖြေ ခဲ. ဖူး တဲ. အ တွေ. အ ကြုံ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > သုတစွယ်စုံ > သိပ္ပံ > အင်္ဂလိပ် > IELTS ဖြေ ခဲ. ဖူး တဲ. အ တွေ. အ ကြုံ
View Full Version : IELTS ဖြေ ခဲ. ဖူး တဲ. အ တွေ. အ ကြုံ
IELTS ဖြေမဲ. သူ များ အ ကြိုး ရှိ အောင် Ielts ဖြေ ခဲ. ဖူး တဲ. အ တွေ. အ ကြုံ လေး ဝေ မျှ ပါ မယ်။
IELTS အ တွက် ပြင် ဆင် ပုံ
သင်တန်း တက် ခဲ. ခြင်း
သင် တန်း ကို မြို. ထဲ က success မှာ တက် ခဲ. တယ်။ အဲ ဒီ မှာ ၄ skills လုံး သင် တာ နဲ. ၊ skill တစ်ခု ချင်း ဆီ ခွဲ ပြီး သင် တာ ဆို ပြီး နှစ်ခု ရှိ တယ်။ ကျွန်တော်. တုန်း က တော. Speaking skill နဲ. Writing skill ကို အဲ. ဒီ မှာ တက် ခဲ. တယ်။ နောက် တော. Speaking အား နည်း လို. Care S Language Academy မှာ speaking skill သီး သန်. တက် ခဲ. တယ်။ သူ. မှာ လဲ တစ်ခု ချင်း ဆီ ခွဲ တက် လို. ရ တယ်။
Reading နဲ. Listening က တော. ဘယ် မှာ မှ မ တက် ဖြစ် ခဲ.ဘူး။
Self Study လေ. လာ ခြင်း
Self study အ တွက် ကောင်း တဲ. စာ အုပ် နာ မည် လေး တွေေ၇း ပေး လိုက်မယ်
၁။Focus on Academic Skill for IELTS ( စာ အုပ် က အ ပြာ လေး)
၂။ Step Up to IELTS
၃။ Cambridge IELTS 4,5,6,7
ပြီး တော. မြို. ထဲက National တို. Active တို. လို CD အ ခွေ ဆိုင် တွေ မှာ တော် တော် ကောင်း တဲ.ခွေ တွေ ရှိတယ်။
၁။ Study English IELTS Preparation (အဲ ဒီ ခွေက အ တော်ကောင်း တယ် 4GB လောက် ၇ှိ မယ် ထင် တယ်။ အ ခွေ ရဲ. ဒု တိ ယ အ ပိုင်း က windows media player နဲ. ပဲ ဖွင်. လို ၇ တယ် ။ တစ် ခြား power DVD တို. ဘာ တို. နဲ. မရ ဘူး။
၂။ Tell me More English သူက speaking အ တွက် ကောင်း တယ်။ (internet မှာ ကြည်. တာ ခွေ တန်း ဖိုး က $ 500 ၊ မြန် မာ ပြည်မှာ တော. ၁၀၀၀ နဲ. ရ တယ်
၃။ IELTS ebook collection
စာ မေး ပွဲ အ တွင်း အ တွေ. အ ကြုံ
စာမေး ပွဲ ကို MICT မှာ သွား ဖြေ ရ တယ်
Listening အ တွက် က Cambridge IELTS 4,5,6,7 ကို နား ၇ည် ၀ ရင် အ တော် ဖြေ နိုင် လ်ိမ်. မယ်။ ဘာ ဖြစ် လို. လဲ ဆို တော. မေး ခွန် ပုံ စံ၊ instruction က အ စ အဲ. ဒီ စာ အုပ် တွေ အ ထဲ က အတိုင်း ပဲ။
ပြီး တော. Listening မှာ ဘာ ပြောမ လဲ ဆို တာကို predicting skill နဲ. ကြို တင် ကြည်. ထား ရ မယ်။
Reading က လဲ အဲ. ဒီ စာ အုပ် တွေ အ ထဲ က အ တိုင်း ပဲ။ အဲ ဒီ စာ အုပ် တွေက ဆယ် တန်း စာ မေး ပွဲ မှာ လို. Old question တွေ နဲ. တူတယ်။ သေ သေ ချာ ချာ လေ. ကျင်. ထား ရင် မေး ခွန်း format ကို တော် တော် လေး ပိုင် နေ လ်ိမ်. မယ်။
Writing အတွက် တော. Essay မှာ အလုံး ၂၅၀ ပြည်. အောင် စာ ချဲ. တဲ. Essay လေး မျိုး လောက်ကို အ ပိုင် ကျက် ပြီး ၊ ကိုယ်. ဘာ သာ ဟို ထည်. ဒီ ထည်. နဲ. ပြီး သွား တာ ပဲ :4: :4:
Speaking ကို BC မှာ ပြန် ဖြေ ရ တယ်။ ကျွန်တော်. တုန်း က မြန် မာ ဆ၇ာ မနဲ. ကျ တယ်။ စ ကား ပြော တာ သိပ် မြန် လို. ဘာ မှ သေချာ မ ကြား လိုက် ဖူး။ :4: :4:speaking လဲ အဲ ဒီ IELTS 4,5,6,7 ဆို တဲ. စာ အုပ် တွေ ထဲ က အ တော် ပါတယ်။ အဲ ဒီ စာ အုပ် တွေကို သေ ချာ လေ. ကျင်. ထား ဖို. လို မယ်။ ကျွန် တော်.တုန်း က တော. ပါ မယ် လို. မ ထင် လိုက် လို. သေ ချာ တောင် မ ကြည်. သွား ရ ဘူး။
IELTS က အ မှတ် ကို skill တစ် ခု ချင်း ဆီ အ မှတ် ပေး ပြီး average ယူ တော. ကိုယ် ကျွမ်း တဲ. Skill မှာ အ မှတ် များ များ ၇အောင် လုပ် ပြီး ကိုယ် လို တဲ. Overall band score ကို ရ အောင် လုပ် လို. ရ တယ်
ကျွန် တော်. ရဲ. Test Report Form ကို န မူ နာ တင် ပေး လိုက် တယ်။
PM ပို. ပြီး မေး တဲ. လူ တစ် ယောက် ရှိ လို. ဖြေ လိုက် တယ်။
မြန် မာ ပြည် မှာ တော. IELTS Ebook တော် တော် များ များ ကို Active အ ခွေ ဆိုင် မှာ ၀ယ် လို. ရ တယ်။
အ ခွေ ဆိုင် တွေ မှာ မ ရှိ တဲ. Link တွေ ကို တင် ပေး လိုက် တယ်
Old question စာ အုပ် က IELTS 1,2,3,4,5,6,,7 ဆို တဲ. စာ အုပ် တွေ ပါ။ မြို. ထဲ မှာ အ လွယ် တ ကူ ၀ယ် နိင် ပါ တယ်။ :)
ကျွန် တော် က access kit dial up သုံး တော. အဲ. ဒီ လင်. တွေကို ကျွန် တော်. ညီ ၀မ်း ကွဲ ဆီ ကို email ပို ပြီး download လုပ် ခိုင်း ထား တော. ဘယ် လင်. က အ လုပ် လုပ် သ လဲ မ လုပ် ဘူး လဲ ဆို တာ သ တိ မ ထား မိ လိုက် ဘူး။သူ က ကျွန် တော်. ဆီကို memory stick နဲ. ပြန် ယူ လာ ပေး တယ်။ ဘယ် လို ဆွဲ ခဲ. သ လဲ တော. မ သိဘူး တော် တော် များ များ ရ လိုက် တယ်။
ဒီ လို ဆို အ ခု ဒီ လို လုပ် ပါ။
ကို နှိပ် ပါ။
ပြီး ရင် ဘယ် ဘက် search box မှာ ielts လို. နိပ် ပါ။
အဲ. ဒီ မှာ 1 to 12 အ ထိ ပြ လိမ် မယ်။
လင်. တွေ အ များကြီး ပေး ထား လိမ်. မယ်။ တစ် ခု မ ဟုတ် တစ် ခု ရ လိမ်. မယ်။ rapidshare အ ကောင်. ရှိ ရင် အ ကောင်း ဆုံး ပေါ.
တော် တော် ကောင်း တဲ. ielts ebook Site ပါ ။ စာ အုပ် တော် တော် များ များ ရ လိမ်. မယ်။
ဖတ် လို. တောင် နိုင် မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ :4: :4: :4:
( အခု site ကို ကျွန် တော်. စမ်း ပြီး ပြီး ရ မှာ ပါ)
ဒါ က Myanmar ပြည် က british council site ပါ။
naymingyi တယောက်လဲ ပျောက်နေတယ် ....
ှုIELTS အကြောင်း ဖြေဖူးတဲ့သူတွေ ... သိတဲ့သူတွေ ... အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေ ... လေ့လာနေဆဲသူတွေ .... ဖြေဆိုအမှတ်ကောင်းကောင်းရဖူးသူတွေ ....
ကျနော် လဲ စိတ်ကူးပေါက်လို့ IELTS ကို ဖြေဆိုချင်လို့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စတင်လေ့လာရမယ်ဆိုတာလေး ....
လက်တွေ့ကျကျ Self-study လုပ်ချင်လို့ ဘယ်လို စာအုပ်တွေ ကိုအားကိုးပြီး ...
ဘယ်လို ဖြေဆိုရမယ်ဆိုတာလေး ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး ....
အောက်ကစာအုပ် Soft-copy လေးတွေလဲရနိုင်မယ်ဆိုရင် လိုချင်ပါတယ် ....
ကိုနေမင်းကြီးက သဘေ်ာပေါါရောက်နေတယ်ဗျ။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုပဲ အကူအညီတောင်းရမယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား။